မိန်းမတွေရဲ့စိတ်ဟာ အမြဲတန်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သင်သတိပြုပါ
July 3, 2022 thanzin laypyay 0
မိန်းမတွေရဲ့စိတ်ဟာ အမြဲတန်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သင်သတိပြုပါ သွားဆရာဝန်ဆီကို အပျိုကြီးတစ်ယောက် သွားနုတ်ဖို့ ရောက်လာတယ်… သူမကိုကြည့်ရတာ ကြောက်နေပုံ ရတာနဲ့ ဆရာဝန်က ဟာသတစ်ခုလောက် ပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ စင်ပေါ်က ရာဘာလက်အိတ်ကို ယူဝတ်ရင်း မေးလိုက်တယ်။ “ဒီလက်အိတ်တွေ ဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ သိလားဗျ” “ဟင့်အင်း မသိဘူးဆရာ” “ဒီလိုဗျ စက်ရုံမှာ […]
အပျိုကြီးတွေ အလိုရှိသော ယောက်ျား
July 2, 2022 thanzin laypyay 0
အပျိုကြီးတွေ အလိုရှိသော ယောက်ျား ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မိန်းမ ကင်းရှင်းသောသူ အလိုရှိသည်ဟု အပျိုကြီးတစ်ယောက် သတင်းစာထဲတွင် ကြော်ငြာ ထည့်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံး အရက်နံ့ ထွက်နေပြီး လက်ထဲတွင် စီးကရက် ကိုင်ထားသော လူတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ”ဘာကိစ္စလဲ” လို့ အပျိုကြီးက မေးလိုက်တော့… ”သတင်းစာထဲမှာ […]
June 12, 2022 thanzin laypyay 0
ရွှေရင်အေး စားပြီးမှ…. ရေ သောက်ရင်တော့.. တစ်မျိုးပေါ့ကွာ… ” ယောက်ျား..” ” ဟေ..” ” တော်… ခင်ဝင့်ဝါကို တော်တော် ကြိုက်လား..?” ” ဟမ်.. ဘာဖြစ်လို့တုန်း..” ” ကျုပ်မေးတာ ဖြေစမ်းပါ..။ တော်.. ခင်ဝင့်ဝါကို.. တော်တော်ကြိုက်လားလို့..” ” နေပါအုံး […]
အော်… ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အပျိုကြီးရယ်…..
June 4, 2022 thanzin laypyay 0
အော်… ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အပျိုကြီးရယ်….. “ခင်ဗျားမှာ အိမ်ထောင်ကျမယ့်ဇာတာ ရှိပါတယ်” အပျိုကြီးခင်မျာ အရမ်းပျော်သွားပြီး… “ဟီ ဟိ ဆရာ ဒါဆို ဘယ်အချိန်ရောက်အိမ်ထောင်ကျမလဲ… တိတိကျကျလေး ဟောလို့ရရင် ဟောပေးပါဆရာရယ်” “အိမ်း ဒါကတော့ …. ခင်ဗျားရဲ့ကံဇာတာ အပေါ်မူတည်ပြီး နိမိတ်ကောက်ယူတဲ့ အဟောနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ… ဒါ့ကြောင့် […]
လက်မသရမ်းနဲ့… လက်မောင်းရောင်ရမ်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆေးခန်းလာပြတယ် ဆေးခန်းလည်းရောက်ရော… ဒေါက်တာ ကျွန်တော့်လက်မောင်းက ဆေးလည်းစုံနေပြီ ခုထိရောင်တာ မပျောက်သေးဘူးဆရာ… အဲ့တော့ ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်မှာ computerနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရောဂါစစ်တဲ့စက် ရှိတယ်ဗျ အဲ့မှာငွေ1000 ထည့်ပြီး ခင်ဗျားဆီးကို စစ်လိုက်တာနဲ့ အဖြေ ထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျ… အဲ့ဒီအခါ လူနာက computer […]
May 30, 2022 thanzin laypyay 0
ဈေးပေါပေမဲ့ ပစ္စည်းကောင်းပါတယ်… တခါတုန်းက မိန်းမလှလေးတယောက် စားသောက်ဆိုင်ထိုင်ရင်း စားပွဲပေါ်ရှိ မီနူးကဒ်ကလေးမှ တရုတ်စာလုံးများအား ကြည့်ကာ လှလွန်းချည့်ဟု မှတ်၍ ကူးယူ လာခဲ့လေသည်…။ သူမ အင်္ကျီအသစ်တထည် ချူပ်သောအခါ မီနူးကဒ်မှ ကူးယူလာသော တရုတ်စာလုံးလေးများကို အင်္ကျီရင်ဘတ်ပေါ်တွင် ဇာပန်း ရေးထိုးထားလိုက်သည်… ။ ပြီးလျှင် သူ့အင်္ကျီလေးကို […]
အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် အရက်သမားအား ရွေးချယ်သင့်သည့် အမျိုးသမီးများ ဒီကောင်းကျိုးများရနိုင်၏… ၁ ။ မူးနေသည့်အချိန်များတွင် မိမိ မလှသော်ငြားလည်း သူတို့အမြင်တွင် အရမ်းလှသည်ဟု ထင်မြင်နေတတ်ခြင်း… ၂ ။ ညနေတိုင်း အရက်ဆိုင်တွင် အနေများသဖြင့် ညနေစာကို အမြဲတစ်ယောက်စာ လျှော့ချက်ရခြင်း… ၃ ။ ဆေးသမား ဖဲသမား […]
Total Hits : 336100